Glipizide vs. metformin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ရပ်ရွာ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း သတင်း ကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Glipizide vs. metformin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Glipizide vs. metformin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Glipizide နှင့် metformin တို့သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည်သွေးသကြားဓာတ် (ဂလူးကို့စ်) အားစွမ်းအင်အတွက်ဆဲလ်များသို့သယ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသောအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းနှင့်ပြwithနာရှိသည်။ အင်ဆူလင်သည်အလုပ်မလုပ်ပါကအင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂလူးကို့စ်အဆင့်တိုးလာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားကျန်းမာရေးပြtoနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Glipizide နှင့် metformin တို့သည်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်မြင့်မားသောဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုစီမံရန်ကူညီနိုင်သည်။
အေးဂျင့်အသစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ glipizide နှင့် metformin သည်စျေးသိပ်မကြီးသော anti-ဆီးချိုဆေးများဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၏ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ခြုံငုံသက်ရောက်မှုများတူညီမှုရှိသော်လည်း glipizide နှင့် metformin သည်ကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
glipizide နှင့် metformin အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Glipizide သည် Glucotrol အတွက်ယေဘူယျအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် sulfonylureas ဟုခေါ်သောဆေးအမျိုးအစား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည် အင်ဆူလင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုနှိုးဆွ ပန်ကရိယကနေ။ အင်ဆူလင်ဓာတ်များများပြားလာခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်။
Glipizide ကို5mg or 10 mg ပါးစပ်ဆေးပြားအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယေဘူယျ glipizide သည် ၂.၅ မီလီဂရမ်၊ ၅ မီလီဂရမ်နှင့် ၁၀ မီလီဂရမ်တို့ဖြင့်ဖြန့်ချိသည့်တက်ဘလက်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Glipizide ကိုမနက်စာမစားမီနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
Metformin သည် Glucophage (သို့) Riomet များအတွက်ယေဘူယျအမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် biguanides ဟုခေါ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Metformin သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအားဖြင့်ကုသရန်အလုပ်လုပ်သည် ဂလူးကို့စထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျလာ အသည်းနှင့်အူထဲမှာဂလူးကို့စ၏စုပ်ယူမှုလျော့ကျလာသည်။ ဒါဟာအစအင်ဆူလင် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်သျှူးများတွင်ဂလူးကို့စများ၏စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်။
Metformin အားအားဖြင့် 500 mg, 850 mg နှင့် 1000 mg တို့ဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ် metformin တက်ဘလက် ထို့အပြင်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ယူခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်။ ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်သော metformin ကိုမကြာခဏနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်သောက်ရန်သတ်မှတ်သည်။
glipizide နှင့် metformin အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း Sulfonylurea Biguanide
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ရရှိနိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျဗားရှင်း ရရှိနိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျဗားရှင်း
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ Glucotrol ဂလူးကို့ဖ်
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်းတက်ဘလက် ခံတွင်းတက်ဘလက်
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? နံနက်စာမစားမီတစ်ရက်လျှင်5mg ။ ဆေးညွှန်းကိုတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရချိန်ညှိနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင် 40 မီလီဂရမ်အများဆုံးပမာဏ။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 500 မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်အစားအစာများနှင့်အတူနေ့စဉ် 850 မီလီဂရမ်။ ဆေးညွှန်းကိုတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရချိန်ညှိနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၂၅၅၀ မီလီဂရမ်အမြင့်ဆုံးပမာဏ။
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရေရှည် ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရေရှည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများ ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ
glipizide နှင့် metformin အားဖြင့်ကုသအခြေအနေများ
Glipizide နှင့် metformin နှစ်ခုလုံးသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုကုသရန် FDA မှခွင့်ပြုထားသည်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤရောဂါများတွင်နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊
Metformin ကိုတစ်ခါတစ်ရံကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆီးချို၊ ဆီးချိုကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေများနှင့်အခြားအခြေအနေများကိုကုသရန်မသင်္ကေတကိုအသုံးပြုသည် Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ။ အချို့သော antipsychotic ဆေးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည့် Metformin ကိုကိုယ်အလေးချိန်တိုးရန်ကုထုံးကို Off- တံဆိပ်ဖြင့်လည်းအသုံးပြုသည်။
အခြေအနေ Glipizide Metformin
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ကိုယ်ဝန်ဆီးချို မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Polycystic Ovary syndrome ရောဂါ မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
antipsychotic ကုထုံးကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန် မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
glipizide သို့မဟုတ် metformin ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
Glipizide နှင့် metformin တို့သည်နှစ်မျိုးလုံးတွင်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွင်း glycemic control ကိုတိုးတက်စေရန်ထိရောက်သောဆီးချိုရောဂါဆေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို Monotherapy အနေဖြင့်သို့မဟုတ် Metaglip ဟုခေါ်သောပေါင်းစပ်ဆေးလုံးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ Glipizide နှင့် metformin တို့သည်သင့်လျော်သောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များဖြင့်အသုံးပြုသောအခါအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။
Metformin သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ပထမဆုံးသောကုထုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုအဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များအရသိရသည် အမေရိကန်ဆီးချိုရောဂါအသင်း (ADA) ။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအားနှိုင်းယှဉ်ပါက metformin သည် glipizide ထက်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Double-blind, လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအရ, metformin ပိုကြီးတဲ့ပြသခဲ့သည် cardioprotective အကျိုးသက်ရောက်မှု ငါးနှစ်ကာလပြီးနောက် glipizide ထက်။
နောက်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ရုံးတင်စစ်ဆေး metformin သည် glipizide ထက်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင် metformin သောက်သူများသည် ၂၄၊ ၃၆ နှင့် ၅၂ ပတ်အကြာတွင် glipizide ထက်အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စအဆင့်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိခဲ့သည်။ metformin သောက်သောသူတို့သည်လည်းနိမ့်သည် HbA1c အဆင့် ၅၂ ပတ်အကြာမှာ glipizide သောက်နေသူတွေထက်။ Metformin သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး glipizide သည်ကုသမှုခံယူသူများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိပါကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍၊ သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့် နှင့်သင်သောက်သုံးနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများ၊ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးသည်အခြားတစ် ဦး ထက် ပို၍ ဦး စားပေးနိုင်သည်။
Glipizide စျေးနှုန်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
glipizide နှင့် metformin နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Glipizide သည်ယေဘုယျအားဖြင့် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သောယေဘူယျဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ဆေးဖြစ်သည်။ glipizide ၏ပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ငွေပမာဏသည် ၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၉ အထိအထိရှိသည်။ ပျမ်းမျှလက်လီစျေးနှုန်းမှာ glipizide သည်ဒေါ်လာ ၃၀ ခန့်ရှိသည်။ ပါဝင်သည့်ဆေးဆိုင်များတွင် SingleCare glipizide ကူပွန်သည်ကုန်ကျငွေကိုဒေါ်လာ ၄ အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
Metformin သည် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်အကျုံးဝင်သောဆေးညွှန်းဆိုသည့်ဆီးချိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဖြစ်သည်။ Medicare ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်သည် ၀ ဒေါ်လာမှ ၈ ဒေါ်လာအထိရှိပြီးသင့်ဆေးဆိုင်ပေါ် မူတည်၍ လက်လီစျေးနှုန်းမှာ ၂၅ ဒေါ်လာခန့်ရှိသည်။ SingleCare မှ metformin ကူပွန်သည်စျေးနှုန်းကို ၄ ဒေါ်လာအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စံသောက်သုံးသော တစ်နေ့လျှင်5mg (ဆေးပြား ၆၀) တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 500 mg (ဆေးပြား ၆၀)
ပုံမှန် Medicare copay $ 0- $9$ 0- $ 8
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $4+ $4+
glipizide နှင့် metformin ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
glipizide ၏အဖြစ်များဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာသကြားဓာတ်နည်းသည် ( hypoglycemia ), ဝမ်းချုပ်ခြင်း, ဝမ်းလျှော, ပျို့ချင်နှင့်မူးဝြေခင်း။
metformin ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း (astenia)၊ hypoglycemia နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
glipizide ၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ပြင်းထန်သော hypoglycemia နှင့် hemolytic anemia ပါဝင်သည်။ metformin ၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည် လက်တစ်အက်စစ် နှင့်ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့။ glipizide သို့မဟုတ် metformin ၏အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Hypoglycemia ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၁% –၅%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် * မဟုတ်ဘူး -
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် 53%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၂၆%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် * မဟုတ်ဘူး -
အားနည်းချက် မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၉%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၆%
ကြိမ်နှုန်းကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စမ်းသပ်မှုမှအချက်အလက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများစာရင်းအပြည့်အစုံမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Glipizide ), DailyMed ( Metformin )
glipizide နှင့် metformin ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Glipizide နှင့် metformin တို့သည်အလားတူဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အချို့သောဆေးဝါးများသည်သကြားဓာတ်နည်းသော glipizide နှင့် metformin တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် hypoglycemia ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးစေသည်။ ဤဆေးများတွင်အခြားဆေးဝါးများနှင့် ACE inhibitors နှင့် angiotensin type II receptor blockers ကဲ့သို့သောသွေးပေါင်ချိန်ကျသည့်အခြားဆေးများပါဝင်သည်။
အချို့သောဆေးများသည် glipizide နှင့် metformin တို့၏မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဒီဆေးတွေမှာ calcium channel blockers, diuretics, corticosteroids, beta blockers နဲ့ or contraceptives တို့ပါဝင်တယ်။ Beta blockers ကိုသောက်နေစဉ် hypoglycemia ၏လက္ခဏာများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဆေးဝါးများသောက်သုံးနေသူများတွင်၎င်းတို့အားစစ်ဆေးသင့်သည်။
Metformin သည် lactic acidosis ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည့် topiramate နှင့် zonisamide ကဲ့သို့သောကာဗွန် anhydrase inhibitors နှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ranolazine နှင့် vandetanib ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများသည် metformin နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကျောက်ကပ်မှထုတ်ယူခြင်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ ဤဆေးများသည်သွေးထဲတွင် metformin ပမာဏတိုးပွားစေပြီး Lactic acidosis ဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုးစေသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Glipizide Metformin
Dichlorphenamide ကာဗွန် anhydrase inhibitors မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Ranolazine antianginals မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Vandetanib Tyrosine kinase inhibitors မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Miglitol ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ကွမ်းခြံကုန်း ACE inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Losartan အေးဂျင့်များပိတ်ဆို့ခြင်း Angiotensin II ကိုအဲဒီ receptor ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စိုင်းထီးဆိုင် ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Methylprednisolone corticosteroids ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဘူမီနိုက် Diuretics ဆီး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Metoprolol Beta blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Norethindrone အီစထရိုဂျင်နှင့်ပါးစပ်တားဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
glipizide နှင့် metformin ၏သတိပေးချက်များ
ဂလူးကို့စ်လျော့နည်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်၊ glipizide နှင့် metformin သည် hypoglycemia သို့မဟုတ်သွေးသကြားဓာတ်နည်းပါးသောအန္တရာယ်ကိုသယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ glipizide သို့မဟုတ် metformin ကိုအခြား antidiabetic agent များနှင့်အတူသောက်သောအခါ hypoglycemia အန္တရာယ်တိုးလာသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းသည်လည်းဤအန္တရာယ်တိုးလာနိုင်သည်။ hypoglycemia ရောဂါလက္ခဏာများတွင် ဦး နှောက်အာရုံကြောခြင်း၊ ချွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဂလူးကို့စ် ၆- ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (G6PD) ချို့တဲ့သောလူအချို့သည် glipizide ကိုသောက်နေစဉ် hemolytic anemia ဖွံ့ဖြိုးမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော် GP6D ချို့တဲ့ခြင်းမရှိသောလူအချို့သည်လည်း hemolytic anemia ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
metformin အသုံးပြုခြင်းသည် metformin နှင့်ဆက်စပ်သည့် Lactic acidosis ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤ Lactic acidosis အမျိုးအစားသည်များသောအားဖြင့် metformin အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်လည်ပတ်မှုလျော့နည်းသွားသောလူများတွင်လက်တစ်အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ Lactic acidosis ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ပျို့ချင်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်နာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
glipizide သို့မဟုတ် metformin နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
glipizide နှင့် metformin နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Glipizide သည်ယေဘုယျဆေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး sulfonylureas ဟုခေါ်သည်။ glipizide အမှတ်တံဆိပ်သည် Glucotrol ဖြစ်သည်။ Glipizide သည်ပန်ကရိယမှအင်ဆူလင်ဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်မှုအားဖြင့်သွေးသကြားဓာတ်ပမာဏလျော့ကျစေသည်။ ၎င်းကိုချက်ချင်းဖြန့်ချိ။ တိုးချဲ့ထားသောပါးစပ်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
Metformin ကိုဘုံအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော Riomet နှင့် Glucophage ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းသည်ဘီဂွိုက်နိုက်စ်ဟုခေါ်သောဆေးယဉ်ပါးသည့်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Metformin သည်အင်ဆူလင်အာရုံခံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အသည်း၌ဂလူးကို့စ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဂလူးကို့စ်၏အူသိမ်စုပ်ယူမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Metformin ကိုချက်ချင်းဖြန့်ပြီးဖြန့်ချိသည့်ပါးစပ်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
glipizide နှင့် metformin အတူတူလား?
Glipizide နှင့် metformin အတူတူမရှိကြပါ။ Glipizide ဆိုသည်မှာအရွယ်ရောက်သူများတွင်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါကိုကုသသော sulfonylurea ဖြစ်သည်။ metformin သည်အရွယ်ကြီးသူနှင့် ၁၀ နှစ်အရွယ်နှင့်ကလေးများတွင် Type2diabetes ကိုကုသသော biguanide ဖြစ်သည်။ Glipizide နှင့် metformin သည်မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီး၊
glipizide သို့မဟုတ် metformin ပိုကောင်းသလား။
Glipizide နှင့် metformin နှစ်မျိုးလုံးသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ၏သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးသည်။ အမေရိကန်ဆီးချိုရောဂါဖောင်ဒေးရှင်း၏အဆိုအရ လမ်းညွှန်ချက်များ , metformin အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ Glipizide နှင့် metformin တို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံပိုမိုဂလူးကို့စ်ကိုလျှော့ချစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုလိုအပ်သည့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အတူတကွခေါ်ယူနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဆီးချိုရောဂါဆေးသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ဆေးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် glipizide သို့မဟုတ် metformin ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
metformin နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ glipizide သည်သန္ဓေသား၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ပိုမိုမြင့်မားသောအလားအလာရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ metformin သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လူသားတွေအတွက်အပြီးသတ်သောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုနည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါ glipizide သို့မဟုတ် metformin ကိုအရက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
glipizide (သို့) glipizide သောက်နေစဉ်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရန်မတိုက်တွန်းပါ ကွမ်းခြံကုန်း ။ အရက်ယမကာသောက်ခြင်းကခန့်မှန်းရခက်သည့်သကြားဓာတ်ပမာဏကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ hypoglycemia သို့မဟုတ် hyperglycemia ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ အရက်သည်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည် လက်တစ်အက်စစ် metformin အပေါ်နေစဉ်။
hypoglycemia ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် glipizide ကိုသောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်အစားအစာများမတိုင်မီဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးလျှင် glipizide ကိုထိုနေ့၏ပထမဆုံးစားပွဲမတိုင်မီသောက်ရန်အကြံပြုသည်။
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ glipizide သည်ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေကြောင်းမသိရပါ။ glipizide ဖယ်ရှားခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိသူများအတွက်နှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ထို့နောက် glipizide စုဆောင်းခြင်းသည်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းပါးနိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်အလုံခြုံဆုံးဆေးကဘာလဲ။
Metformin ကိုများသောအားဖြင့်လူအများစုတွင်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ပထမဆုံးသောကုသမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ metformin ဟာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့၊ လုံခြုံပြီးထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြား anti-ဆီးချိုဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် metformin နှင့်ဆက်စပ်နေသည် အနိမ့်သို့မဟုတ်အလားတူ HbA1c အဆင့်ဆင့် ။ metformin ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် sulfonylureas ကဲ့သို့သောအခြားဆေးများထက် hypoglycemia နိမ့်ကျခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။
ဆေးဝါးများဘာလုပ်ကြမလဲ သင်ဆေးဆိုင်အကြောင်းကိုမသိသောအရာ 8
JUICE DIET: သင်၏နေ့ကိုစတင်ရန် Detox Juice ချက်ပြုတ်နည်း ၄ မျိုး
walmart တွင်ဒေါ်လာ ၄.၀၀ ဆေးညွှန်းများစာရင်း
ကြွက်သားဖြေလျှော့သူများနှင့်အတူ Advil ကိုသင်သောက်နိုင်သလား
amoxicillin မှ yeast ကူးစက်မှုရနိုင်သလား
test strips များအတွက်ဆေးစာလိုသလား